‘Ndakachengeteswa mwana asiri wangu’
‘Ndakachengeteswa mwana asiri wangu’	Thursday, 26 July 2012 10:01	View Comments
MURUME wekuMabvuku, muHarare akazvuviramukadzi wake kudare achida kuripwa kutambisirwa nguva yake uye kugura muchato achiti akachengeteswa mwana asiri wake.Munyaradzi Majonga akaendesa Tandiwe Chisango wekuKadoma kudare reHarare Civil Court.
“Ndakaroora Tandiwe muna2010 tikachata munaKubvumbi 2011 kuchechi yeJehovha’s Witness. Panguva iyi, Tandiwe aiva atova nepamuviri paBiard Phiri. Ini ndakabhadhariswa mabhiri ekuchipatara pakuzvarwa kwemwana asiri wangu uye kutori nechikwereti.“Pandakaziva nezvemwana uyu iye nevabereki havana kumboramba saka ngavandiripe nguva yangu yavakatambisa uye vandichenure zita rangu kuchipatara kuti handisirini baba vemwana uyu,” akadaro Majonga.
Chisango akaudza dare kuti haana mhosva sezvo vabereki vake naiye Majonga vari ivo vakamumanikidza kuti aroorwe naye nekuti anonamata.“Ini handina zvandingataura nekuti iye nevabereki vangu
ndivo vakandimanikidza kuti ndiroorwe naye. Ndaiva nemukomana wangu ivo vakati toda anonamata saka ngavaripane pachavo, ndingatoripa mari yekuchipatara yoga,” akadaro Chisango.Mutongi Vongai Muchuchuti akapa mutongo wokuti Chisango aripe Majonga mari yaakashandisa kuchipatara kutanga mwedzi waChikunguru. -Kwayedza